China sleeve lwangaphandle Cage Ukukhetha Valve mveliso kunye nabenzi | Cepai
Ivaluva zokukhetha eziqhelekileyo zihambelana ne-API 6A 21th Edition, kwaye zisebenzisa izixhobo ezifanelekileyo zenkonzo ye-H2S ngokomgangatho we-NACE MR0175.
Udidi lwezinto: AA ~ FF
Ii-valves ze-CEPAI ze-Chock zibandakanya iValve yoKhetho oluCokisekileyo, iValve yoTshintsho eQinisekisiweyo, Ivaluva yokuCoca inaliti, iValve yeSleeve Cage Chock Valve. I-valves e-chock esekwe kwiimfuno ezahlukeneyo. Izihlalo zabo kunye nenaliti yevalve eyenziwe yintsimbi eyomeleleyo, ephucula ukunganyangeki, ukusebenza ngokuxhathisa kokugungxula, kunye nezinto zomlomo wombhobho wentsimbi owenziwe ngeeseramiki okanye kwialloy elukhuni, itorque yohlobo lweCage valve choke valve yitorque encinci, inokulungisa nokusika ulwelo njl.njl, ukulawula isantya sokuhamba ngokutshintsha umlomo wombhobho wokumpompoza wobukhulu obahlukeneyo.
Impembelelo encinci kunye nengxolo yolwelo
◆ Izinto zomzimba / zebhonethi zibandakanya i-carbon yentsimbi, i-alloy steel, i-stainless steel kunye ne-duplex insimbi
Emgceni okanye engile umzimba ukhetho
◆ Ivaluva kungenziwa automated kunye actuators zombane okanye womoya
◆ Isinyithi kwisinyithi sivale ngokungqinelana neklasi ye-ANSI VI & V
Igama Ukukhetha Valve
Umzekelo Ivelufa yokuKhetha eVulekileyo / Ivelufa yokuTshintshela eguqukayo / Inaliti yokunyathela inaliti / I-Sleeve yangaphandle yeCage Valve Valve
Uxinzelelo 2000PSI ～ 15000PSI
Ububanzi 2-1 / 16 "7-1 / 16" (46mm ～ 230mm)
• Iikiti zokuguqula intsimi ukusuka kokulungileyo ukuya kokuminya okuguqukayo kunye nokunye
• I-Bonnet nut enomngxuma wokungena ukuze ukhuseleke ngexesha lenkonzo.
• Izinto zomzimba / zebhonethi zibandakanya, intsimbi yekhabhoni, intsimbi ye-alloy, intsimbi engenasici kunye nensimbi engenasici engenanto ukuze ihambelane nokusetyenziswa okungafaniyo.
Ukonyuka phakathi kobukhulu beembotyi ze-0.4 mm (1/64 in) ukuya kwi-50.8 mm (128/64 in).
Izinto ezahlukeneyo zokwakhiwa kweembotyi
Isinyithi engenanto • Isitayile sigcwele ngaphakathi. Udongwe lweCeramic • I-Tungsten carbide igcwele
Ulwakhiwo olusisiseko lweembotyi zeBean Fixed Choke
Ukuphakanyiswa kweRhasi kukumisa
Ivaluva zokuhamba kokuhamba kwegesi zenziwa zombini emgceni kunye nakwimeko yokuma komzimba nge-flange, threaded okanye weld end end.
Ngoluhlu lobungakanani bezinto kunye nezinto zokwakha, ezi zivalo zisebenzisa iplagi efakiweyo esiya esihlalweni ukwahluka ngokuthe ngqo kuhambo lokuhamba ngaloo ndlela zibonelela ngolawulo lokuhamba kakuhle.
Ivaluva zolawulo lweJVS ziye zaba yivalve yokuzikhethela kufakelo lofakelo lwegesi.
Iphelug & Cage Ivaluva yokuCoca
Iplagi kunye ne-cage trim zisebenzisa iplagi eqinileyo enemingxunya yokulinganisa imingxunya ehamba ngaphakathi kwendlwana evaliweyo ukulawula ukuhamba. Olu luyilo lubonelela ngobuninzi bokuhamba kwesithuba sokukrala kwevali evaliweyo. Kwimeko evaliweyo, iplagi iyehla ukuvala amazibuko kwikheyiji yokuhamba kwaye inxibelelane neringi yesihlalo ukubonelela ukuvalwa okuhle. Ukuhamba kujolise kwisilayidi ngokudlula kumazibuko kunye nokunyanzeliswa embindini wekheyiji yokuhamba.
EIngalo yangaphantsi yethayile leSleeve Chock Valve
Uhlobo lwesinxibo sangaphandle sisebenzisa umkhono wokuhamba ohamba ngaphezulu kwekhetshi elihanjisiweyo ukulawula ukuhamba. Isinyithi kwisinyithi (ngokuzikhethela i-tungsten carbide) uyilo lwezihlalo ngaphandle komkhono wokuhamba kunye nokuphuma kwesantya esiphezulu kuqinisekisa ukuvalwa okuqinisekileyo kunye nobomi bendawo yokuhlala. Into elawulayo (umkhono wokuhamba) ushukuma kulawulo lwesantya esisezantsi kwaye ukhokelela kukhukuliseko oluphezulu loyilo loyilo. Ukusetyenziswa kwale minxunya kubandakanya ukwehla koxinzelelo oluphezulu kunye nolwelo olunezinto ezixineneyo ezinjengentlabathi yokwakheka. Esi simbo sesiqhelo sihanjiswa kwi-carbide ye-tungsten
Egqithileyo INDLELA YOKUQALA YOKUJONGA IVEKI
Okulandelayo: Ukwandiswa ngeVeveji yeSango lokuKhwela leMigangatho ye-API6A